Selena Gomez သည်သူမ၏ ၂၈ နှစ်မြောက်မွေးနေ့သည် musanews ဖြစ်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ ပထမ ဦး ဆုံးသတင်း အမနာပစကား Selena Gomez သည်သူမ၏ ၂၈ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကိုကျင်းပသည်
Selena Gomez သည်သူမ၏ ၂၈ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကိုကျင်းပသည်
ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ selena ဂိုမက်ဇ အဘယ်သူသည်ပြီးခဲ့သည့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 28 လှည့်!
ဓာတ်ပုံ - @ Instagram / Selena Gomez
သူမသည် Instagram post တစ်ခုဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပွဲလမ်းသဘင်များအတွင်းယူဆောင်လာသည့် Polaroids သုံးခုကိုသူမတွဲပေးခဲ့သည်။ တစ်ခုတွင်သူမသည်သူမ၏အိမ်၏ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ထိုင်နေသည်ကိုရွှေရောင်ဝတ်စားဆင်ယင်ထားသောသူမ၏ကိတ်မုန့်ဖယောင်းတိုင်ကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်သည်။
“ ဒီနေ့နေဖို့ငါမနေ့ကဖုန်းအများကြီးချလိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့စာမူတွေကိုဒီနေ့ငါဖတ်တယ်။ သတင်းစကားတိုင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းကိုအားလုံးချစ်ကြတာငါခံစားခဲ့ရတယ် ယောက်ျားတွေ၊ မင်းကိုငါအရမ်းချစ်တယ်အခု ၂၈ နှစ်ရှိပြီ "
Selena ၏ post သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုချက်ချင်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအကြိမ်ပေါင်း ၄.၅ သန်းကျော်အကြာတွင်အနိုင်ရခဲ့သည်။
နောက်ဆောင်းပါးTop Gun Maverick၊ Mulan နှင့်အခြားရုပ်ရှင်ကားများမှာလည်းနောက်တစ်ကြိမ်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သည်။ ဒီမှာအသစ်သောရက်စွဲများဖြစ်ကြသည်
အိမ်တွင်မှန်ကန်သောခရစ်စမတ်လေထုကိုဖန်တီးပါ။ ဘယ်လိုလဲ? စကြရအောင် ...
Karla Souza သည် Covid မှမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်သည်
ဆိုဖီတာနာသည် Lenny Kravitz ၏ပရိသတ်ဖြစ်သည်